Kwakatangira izwi psychology
(1) Psychology - Izwi rekuti "Psychology" rinotorwa kubva kumazwi maviri e "ChiGiriki" - Psycho naLogos. MuchiGreek, zvinoreva "Psychi" --omweya naLogos - ndi "Sayenzi". Saka izwi iri Zvinoreva zvizere se "sainzi yemweya" iri. Ndokunge, mune "mutauro wechiGiriki", isu mweya mune zvepfungwa
Sayenzi yezvinoreva zvepfungwa
(2) Psychology - Izwi rekuti Psychology rinodaidzwa kuti "Psychology" mumutauro wechiHindi. Psychology inoreva "sainzi yepfungwa" kana - "sainzi yemabasa epfungwa". Ndokunge, 'psychology isainzi inotongwa nepfungwa dzedu, huropi. Zvinorehwa neshoko iri "psychology" raonekwa richichinja nekufamba kwenguva.
Zvakaita se -
(3) Kubva pakubata kusvika kwezana ramakore rechigumi nematanhatu CE - yainzi "sainzi yemweya" Vatsigiri vayo vakuru - "Socrate, Plato, Aristotle, Ram, Hobbes, nezvimwe.
(4) Kubva muzana ramakore rechigumi nematanhatu kusvika kuzana ramakore rechigumi nemasere, yakanzi - "Sayenzi yepfungwa kana uropi". Vatsigiri vayo vakuru - "Thomas, Reid, Locke nezvimwe.
(5) Kubva muzana ramakore rechigumi nematanhatu kusvika kuzana ramakore rechi 19 - yakanzi - "Science of Consciousness". Vatsigiri vayo - "William James, Tichner, Jameslee - etc. vakadaro.
(6) Kubva muzana ramakore re19 kusvika kunguva ye "ikozvino nguva" - yainzi "Science of Behaviour". Mutsigiri waro akasimuka - iye chete "Watson" akaita.
Chekutanga Laborator yePsychology
Rabhoritari yekutanga ye psychology munyika dzekumadokero yakatanga kuvambwa na "William Wunt"
Maererano naWilson, "psychologist" - "Pfungwa iripo mu" limpic system "mukati mehuropi.
Kuongororwa kwe "Western Psychology" kwakatanga muIndia munenge makumi maviri (zana remakumi maviri).
Muhunyanzvi hweIndia, kusimbiswa kuri pakudzidza kwezivo uye nemhando yepadisciplinarity mune zvepfungwa. Mumoyo inosimbiswa inodzidzwa yehana (pfungwa, njere, hutano, pfungwa pamweya) etc. Pasi peizvi, maitiro anotsanangurwa mu "mana corpus". Ndokunge, kwakasimbiswa kunzwisisa zvakanaka maitiro emunhu kubva kune aya mana pfuma.
Aya hupfumi huna akadai anotevera -
➤ Annamaya Kosha - Pasi paAnmaya Kosha, iyo "Gyanandris" uye "Karma Indras" yemuviri wedu inodzidziswa.
➤ Pranmaya Kosh - Under "Pranmaya Kosh" muhunyanzvi hweIndia - "Pamuviri kugona" uye "Prana Shakti" anonyanya kufundwa.
(iii) Manumaya Kosh - Pasi pehunyanzvi hweIndia - "pfungwa" dzemwana dzinodzidziswa pasi pe "Manumaya Kosh".
(iv) Vigyanamaya Kosh - Zvinoenderana nehunyanzvi hweIndia - "Uchenjeri" hwemwana hunosanganisirwa pasi pe "Vigyan - Maya" Kosh.
Dzidzo psychology zvinyorwa
Chereched- Psychology ibazi rehunyanzvi - kubva parakatanga kupatsanurwa na "William James".
Maererano neIndia Psychology - Psychology ndiyo sainzi inochengetedza zviitiko zvakawanikwa kubva ku "ekunze ekunze" zviri muuropi hwedu. Mune mamwe mazwi, chiitiko chakadai chakachengeteka mundangariro yedu - njere - - mweya - mweya - - ndeyepfungwa. Nyanzvi dzezvepfungwa kana vanofunga zveIndia vakadana pfungwa kuti "pfungwa yechitanhatu".
➤ Psychologist - Sekureva kwa Fechner - "Kufunda kwehunyanzvi hwepfungwa - ndikovandudza kwenzira dzepfungwa.
Maererano nenyanzvi yepfungwa Fied uye Chugh - "Psychology ine maviri mazinga - mukati
Nhanho yekutanga ndeye - kuziva nepo chikamu chechipiri chiri- kusaziva - saka - Wakabikwa naChugh - anonzi zvakare baba vesaiziva uye vasingazivi. "